Impikiswano yebhetri ye-iPhone: masicacise izinto | IPhone iindaba
Impikiswano yebhetri ye-iPhone: masicacise izinto phezulu
Sineeveki sinempikiswano malunga nendlela iApple ecothisa ngayo izixhobo ezineebhetri eziwohlokileyo kwaye sele zithintela ukusebenza kwazo ngokufanelekileyo. Inkampani yaseCupertino ibibandakanyeka kukwanda kweendaba kunye neengxelo ezenze le "slowgate" yenye yezona zibaluleke kakhulu kule minyaka idlulileyo.. Ngaphezulu nje kweeyure ezingama-24 ezidlulileyo, inkampani yanyanzelwa ukuba ipapashe ileta evulekileyo eyayisiya kubathengi bayo icacisa umba kwaye inike isisombululo.
Nangona kunjalo, emva kweleta, uninzi lweendaba lupapashiwe kude nokucacisa izinto, baye bazibopha ngakumbi, ukuvelisa uthotho lwezinto ezilindelweyo kubasebenzisi ezingalindelwanga ukuba zizalisekiswe kwaye ziphele zibangela ukuphoxeka okutsha. Kule nqaku sifuna ukunceda ukwenza izinto zicace kancinci kunangoku.
1 Ingxaki yebhetri kunye ne-iPhone yakho
2 Inkcazo ka-Apple
3 I-Apple yehlisa ukubuyiselwa kwebhetri yakho
4 Ngaba ukutshintsha ibhetri kuya kuyiphucula i-iPhone yam?
Ingxaki yebhetri kunye ne-iPhone yakho
Konke oku kwaqala kuba abanye abasebenzisi baqala ukuthumela kwiiforamu ezahlukeneyo ze-intanethi ukuba ii-iPhones zabo ezindala ziqale ukusebenza ngokukhawuleza kangakanani emva kokutshintsha kwebhetri. Xa ulihlaziya eli candelo le-iPhone yakho, into oyilindeleyo kukuba ihlala iiyure ezininzi ngaphandle kokuyibiza, Kodwa aba basebenzisi baqaphele into ebhetele nangoku: ukusebenza kwe-iPhone yabo kuphuculwe, banokuyichasa besebenzisa iimvavanyo zokusebenza ezinike amanani ekhonkrithi.
Emva koku, iziphumo ezininzi zokubekwa komgangatho zenziwe ngesinye sezona zicelo zidumileyo: IGeekbench yaqala ukupapashwa, kwaye baqinisekisa ukuba, Xa utshintsha ibhetri yezixhobo zabo amanqaku afunyenweyo aphezulu. Ngamanye amagama, kwabonakala kucacile ukuba ukutshintsha ibhetri kuyiphucule indlela yokusebenza kwe-iPhone yakho ukongeza kwiiyure zokusetyenziswa ngosuku.
Ngayo yonke le datha, inkampani ibingenandlela yimbi ngaphandle kokuzibhengeza iyavuma ukuba izinciphisa izixhobo ngeebhetri eziwohlokileyo, ngeenjongo ezizodwa zokuphepha iingxaki ezinje ngokuvalwa okungafanelekanga okanye umonakalo owenzekayo kwamanye amacandelo. Lo mboniso, kwinkampani yethu esicinga ukuba yamkelwe kakuhle ngabasebenzisi, iphele ijika ngokuchasene nezigidi Abathengi bacatshukiswa kukufumanisa ukuba iApple ibicothisa i-iPhone yabo ngabom.
Le nkcazo embi yinkampani yalandelwa ngamatyala amaninzi kwihlabathi liphela kunye nentengiso embi kakhulu eyaziwayo "ephelelwe lixesha." Bangaphi abantu abaya kuyitshintsha i-iPhone yabo kwenye imodeli entsha xa utshintsho lwebhetri olwaneleyo belunokwanela? U-Apple ukwapapashe ifayile ye uxwebhu Ukuchaza ukuba zisebenza njani iibhetri, yintoni ukuthotywa okukhoyo, kunye Yintoni le bayibiza ngokuba "ngumsebenzi wokulawulwa kwamandla" Yiyo le nto eyenza ukuba i-iPhone yakho ihambe kancinci xa ibhetri ingasekho kwimeko entle.
Kwiimeko apho kufuneka iindlela ezigwenxa zolawulo lwamandla, umsebenzisi angaqaphela iziphumo ezinje ngezi zilandelayo:
Amaxesha amade okuqalisa
Amaqondo esakhelo asezantsi xa uskrola
Ukufiphala kwangemva (kuchazwe kwakhona kwiZiko loLawulo)
Isithethi esisezantsi yevolumu ukuya kuthi ga kwi-3 dB
Ukuncipha kwenqanaba lesakhelo kunciphiso losetyenziso
Ngexesha lezona meko zigqithisileyo, ifleshi yekhamera iya kukhubazeka (iya kubonakala injalo kunxibelelwano lwekhamera)
Iiapps ezihlaziya ngasemva zingadinga ukuphinda zilayishwe xa ziqala
Uninzi lwezinto ezisisiseko azizukuchaphazeleka kolu lawulo lwamandla. Oku kubandakanya oku kulandelayo:
Umgangatho wenethiwekhi yokufowuna kunye nenqanaba lokusebenza kwenqanaba lokudlulisa inethiwekhi
Umgangatho weefoto kunye neevidiyo ezithathiweyo
Izinzwa ezinjenge-gyroscope, i-accelerometer kunye ne-barometer
I-Apple yehlisa ukubuyiselwa kwebhetri yakho
Kwileta epapashe ngesiNgesi, uApple uthetha ngokuncitshiswa kwebhetri yeemodeli ezithile ze-iPhone ukuze «phelisa inkxalabo yabasebenzisi bayo, enkosi ukuthembeka kwabo kwaye babuyise ukuthembela kwabo banokuthandabuza iinjongo zenkampani«. Ithini kanye kanye?
Nge-Disemba ka-2018, iApple iyakunciphisa ukuphuma kwebaranti ngexabiso le- € 60, ukusuka kwi- € 89 ukuya kwi- € 29, kuyo yonke imodeli ye-iPhone 6 okanye kamva. Iinkcukacha ziya kuthunyelwa kungekudala apple.com/es.
Kwesi siqendu sifutshane, nangona kunjalo, zininzi iinkcukacha ezifanele ukuqaqanjiswa. Sele silazi ixabiso lokugqibela, kwaye Kuyamangalisa ukuba iApple isebenzise i-euro / idollar exchange endaweni yethu kube kanye, njengoko izakuxabisa i- € 29 ($ 29 e-US). Oku kubonisa ukuncitshiswa kwe- € 60 xa kuthelekiswa nexabiso lokuqala (€ 89) ngelixa e-United States ukuncitshiswa kungama-50 eedola, kuba ixabiso lokuqala lalingama- $ 79.
Ayisiyiyo kuphela ixabiso kwaye ibalulekile, nokwazi ukuba zeziphi izixhobo ezifakiwe kule nkqubo yokutshintsha ibhetri. UApple uqaphele ukuba kuphela ukusuka kwi-iPhone 6 ukuya phambili, ke abasebenzisi be-iPhone 5 okanye i-5s baya kushiyeka ngaphandle kwesi sibonelelo. Kodwa ikwenza kucace gca ukuba iya kuba sisixhobo "esinebhetri efuna ukutshintshwa". Ngamanye amagama, umsebenzisi akazukuthatha isigqibo sokuba angalisebenzisa okanye hayi isicwangciso, iya kuba yi-Apple eya kuthi idlulise iimvavanyo ezifanelekileyo kwibhetri ukuze ithathe isigqibo sokuba ayifuni kutshintshwa na.
Nali elinye inqaku elibalulekileyo angakhange alikhankanye iApple kodwa ukuqonda okuqhelekileyo kunye nokuqiqa kuyalela: Ukuba i-iPhone yakho inebhetri engekho mthethweni, ungalibala malunga nokucela utshintsho oluncitshisiweyo. I-Apple ayizukuvuma izixhobo eziye zaphazanyiswa kwiinkonzo ezingekho mthethweni, kungasathethwa ke ngezinto ezingekho mthethweni.
Ngaba ukutshintsha ibhetri kuya kuyiphucula i-iPhone yam?
Impendulo ngu "Ewe", kodwa ngeempendulo ezininzi. Into yokuqala kukuba ibhetri ye-iPhone yakho kufuneka ihlazeke ngokwenene ukuze uqaphele ukuphuculwa. Ukuba ibhetri yakho ilungile kwaye bayayitshintsha, nge-99% kunokwenzeka ukuba uqhubeke neengxaki ezifanayo ubunayo, kuba imvelaphi yabo ayizukuba lelo candelo. Kuya kufuneka ujonge enye isoftware, ulawulo lwesicelo, okanye imiba yoqwalaselo kwisixhobo sakho ukuze ufumanise ukuba yintoni engalunganga ngayo.
Khumbula ukuba iingxaki nge-iPhone "endala kwaye ecothayo" bezikunye nathi iminyaka, zihlala zivela emva kohlaziyo ngalunye olukhulu lwe-iOS, kwaye ngumthetho wobomi. Awunakho ukubuza ukuba i-iPhone kwiminyaka emi-3 eyadlulayo isebenza kunye nentsha kraca, sisona sixhobo sezixhobo ze-elektroniki nokuba siyathanda okanye asithandi. Kwaye kulo nyaka yonke into ibonisa ukuba i-iOS 11 ityhole ngaphezulu kwale ngxaki ngezixhobo ezindala njengoko yenzelwe iiprosesa ezimangalisayo ezinje nge-A11 ye-iPhone 8, 8 Plus kunye no-X nge "Injini yeNeural" yayo engenanto i-iPhone.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Izaziso » Impikiswano yebhetri ye-iPhone: masicacise izinto phezulu
UCarlos J. Bermejo sitsho
Kubonakala kum ngathi bayasikrazula, ndiyakholelwa ukuba ngokuhamba kwexesha ibhetri ihlala ixesha elingaphantsi, usetyenziso oluhlaziyiweyo kufuneka lubize ngaphezulu ukuvula, ukungafikeleli kwimisebenzi emitsha, njl ..., kodwa izinto esizenzileyo ngokugqibeleleyo njengeefowuni, ii-imeyile, iifoto, ziba liphupha elibi ngenxa yokucotha, ukuvalwa ngenkani… Ndicinga ukuba bayayicofa kwaye abayizukuyisombulula ngokuhlawula ukubuyisela ibhetri.
Phendula uCarlos J. Bermejo
Ndabona ividiyo apho bathelekisa ii-iPhone 6s ezimbini, entsha kunye nenye kwiminyaka emibini edlulileyo kwaye umahluko kubomi bebhetri yimizuzu emi-5, ke oko akubonakali ngathi kuninzi, malunga nesantya esiphakathi kwabo ndicinga ukuba ndiyakhumbula ayitsho.
Iyavakala, ngokucotha i-iPhone (endala), itya kancinci, emva koko ibhetri ihlala ixesha elide, kodwa kuba iphelelwe, iyahambelana nale intsha.
Oko kukuthi, kuhlala iiyure ezisi-8 endaweni ye-10 ezihlale zintsha. Uyayicotha ifowuni kwaye ihlala zimbini.
Musa ukuwa ngenxa yezizathu zika-Apple. Isigqibo sokucothisa i-iPhone xa inkqubo ithathela ingqalelo ukuba ibhetri ihlaziyiwe, bekufanele ukuba ibhengezwe ngokucacileyo kwi-iOS, ngotshintsho olunikezelweyo ukuze lusebenze okanye hayi ngokokuthanda komsebenzisi. Kuya kubakho abo bafuna ukonwabela yonke into enokunikwa yihardware nokuba ihlala iiyure ezintathu kuphela, kwaye kuya kubakho abo bakhetha ukuba neeyure ezintandathu zebhetri endaweni yokufumana amava amabi ngokubanzi.
Into eyenzekileyo kukuba iApple ayilumkisanga nangaliphi na ixesha, iphumeze le nyathelo ngaphandle kokubonisana nayo okanye ukwazisa nabani na, kwaye ngoku kuyavela ukuba "kukulungele." Ngenxa yam, kubonakala kulungile kum ukuba bandilumkise kwaye bandinike ukhetho, hayi ukuba bathathe izigqibo ngam kwaye kuncinci kakhulu ukuba bandibeke ngaphandle kwesilumkiso, ukubona ukuba iyangena kwaye andiyiqondi.
I-Apple kufuneka ikhulule isicatshulwa esikhubaza le ndlela yokuziphatha kwaye ikuvumele ukhethe ukuba uyisebenzise okanye hayi. Bonke abanye bazingxengxezo ezingenakuthetheleleka.
Iimpawu ezimbini eziphosakeleyo kumhlathi wesihlanu: endaweni yokuthintela (?) Kwaye uyazi endaweni yokwazi. Umgca wesibini nowokugqibela ngokwahlukeneyo.
UEduardo Barriga sitsho
Ukuba ifowuni ibinokubakho, njengoko kufanele ukuba kunjalo, ibhetri esuswayo yomsebenzisi, le ngxaki ngekhe ibekhona. Awuqondi ukuba le nto kuthiwa yeyona fowuni ilungileyo, kwaye ibiza malini, ukuba nobubudenge bebhetri etywiniweyo. Yenza ngathi imoto yakho ine-hood etywiniweyo kwaye awusoze ukwazi ukufikelela kwi-injini okanye kwibhetri. Kububudenge, akunjalo?
Phendula uEduardo Barriga
Ndivumelana ngokupheleleyo noEduardo. Iyahlekisa ngebhetri etywiniweyo. Ngapha koko, kuye kwafuneka nditshintshe ibhetri kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo kuba icinywe ngesiquphe ngama-40%, bandibiza i-130 euros, kwaye ayisacimi (i-iPhone 5s) kodwa khange ndiqaphele ukuba nantoni na iyaphucuka, kwaye ibhetri iyahlala ndingaphantsi kakhulu kunakuqala. Kubonakala kum ukuba kwiifowuni ezibiza kakhulu, kuya kubakho okuninzi ukuphucula. Iimveliso zeApple azisalunganga njengokuba bezikade zinjalo.
Ulu sayina njani uxwebhu kwi-iPhone okanye kwi-iPad usebenzisa iMeyile
Canary, zonke kwikhamera enye yokhuseleko